Lifestyle | Delo Delo
ငယ်ငယ်ကတည်းက စတိတ်စင်ကြီးပေါ်မှာ ပရိသတ်တွေကို သီဆိုဖျော်ဖြေချင်ခဲ့တာ – စန္ဒီ (၁၅၀၀)	Posted on February 2, 2013 | No Comments
ငယ်ငယ်တုန်းက ငယ်ဘဝ အမှတ်တရ အဖြစ်အပျက်လေးတွေ အများကြီးပဲ။ နောက်ပြီး ငယ်ငယ်ကတည်းက ဓာတ်ပုံရိုက်တာကို ဝါသနာပါခဲ့တာ။ အမှတ်တရတွေဆိုရင် သီချင်းဆိုနေတဲ့ ဓာတ်ပုံလေးက ကျုံပျော်ဘုရားပွဲမှာ သီချင်းသွားဆိုတုန်းက ရိုက်ထားတဲ့ ပုံလေး။ အဲဒီပွဲတုန်းကဆိုရင် ဦးကိုင်ဇာ၊ မမျိုး သန္တာထွန်း၊ ကျန်တဲ့ အနုပညာရှင်တွေလည်း ပါသေးတယ်။ အဲဒီတုန်းက တော်တော်ငယ်သေးတယ်။ ငယ်ငယ်လေးကတည်းက အဆိုဝါသနာပါခဲ့တာ။ ဦးလေးကလည်း အိမ်မှာ ကက်ဆက်ပြင်တာဆိုတော့...	Continue Reading...	သူဘာကြောင့် သ၀န်တိုတာလဲ	Posted on January 10, 2013 | No Comments
ယောက်ျားတွေဟာ တချို့က မိန်းမတွေရဲ့ လက်ချောင်းသွယ်သွယ်လေးတွေကို လှတယ်လို့ မြင်ကြတယ်။ တချို့က မိန်းမတွေရဲ့ ဆံပင်ရှည်ရှည်လေးတွေကိုမှ လှတယ်၊ ရင်ခုန်ဖွယ်ရာ ကောင်းတယ်လို့ ထင်ကြတယ်။ တချို့ကျတော့ ခြေတံလှတာလေးတွေကို သဘောကျကြတယ်။ ယောက်ျားတွေရဲ့ သဘောသဘာဝတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ မိန်းမတိုင်းမှာ အဲဒီလို ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းတွေ တစ်ခုမက အများကြီးရှိနိုင်ပါတယ်။ ထိန်းသိမ်းတတ်ဖို့၊ တန်ဖိုးထားတတ်ဖို့သာ လိုပါတယ်။ မိန်းမတွေဟာ မိန်းမတစ်ယောက်ဖြစ်ရတာကို...	Continue Reading...	ညဘက် ရှားစောင်းလက်ပတ် လိမ်းပြီးအိပ်ရင် နှစ်ရက်သုံးအတွင်း မျက်နှာအလှ ပြောင်းလဲသွားတယ် – မေဖြူဖြူ	Posted on January 1, 2013 | No Comments
မေဖြူဖြူက ထိခိုက်လွယ်တဲ့ အသားဖြစ်တဲ့အတွက် Cosmetic တော်တော်များများနဲ့ မတည့်ဘူး။ မျက်နှာသစ်ပြီးတိုင်း POND’S ကထုတ်တဲ့ Flawless Whiteလေးနဲ့ မျက်နှာသစ်တယ်။ ပြီးရင် သူ့ရဲ့ Day Cream, Night Cream လိမ်းတယ်။ တစ်ပတ်ကို နှစ်ခါလောက်တော့ နံနက်မိတ်ကပ် မလိမ်းခင် ရှားစောင်းလက်ပတ်ကို လိမ်းသွားတယ် မျက်နှာအေးအောင်လို့။ ညအိပ်ခါနီးလည်း ရှားစောင်းလက်ပတ်အဆီကို လိမ်းဖြစ်တယ်။ အသားကိုလည်း...	Continue Reading...	ဘော်ဒီနဲ့ စတိုင်လ်ပုံစံများ	Posted on December 3, 2012 | No Comments
မိန်းမတွေရဲ့ဘော်ဒီကို အကြမ်းဖျဉ်း လေးမျိုးပိုင်းနိုင်တယ်။ ဘော်ဒီအလိုက် ဝတ်စားမှသာ ဖက်ရှင်ရဲ့အရသာကို အပြည့်အဝ ခံစားနားလည်နိုင်လိမ့်မယ်။ နို့မို့ဆို ရူပကလျာ ရုပ်ချောပါလျက် အပြင်မတတ် အဆင်ခက်ကာ အမြင်ရှက်ဖွယ်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ ဘော်ဒီလေးမျိုး ကို အောက်မှာ ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ နောက်ပြီး ပျိုမေတို့ ဝတ်စားတတ်တဲ့ ဝတ်စားဆင်ယင်ပုံ ပုံစံတွေကိုလည်း ဖော်ပြထားပေးပါတယ်။ အေဘော်ဒီ (A) အပေါ်ပိုင်းကကျဉ်းပြီး သေးသွားတယ်။ အောက်ဘက် တင်နဲ့ပေါင်တို့က...	Continue Reading...	တောက်ပတဲ့ အပြုံးပိုင်ရှင်များဖြစ်စေဖို့	Posted on November 20, 2012 | No Comments
သန်မာတဲ့သွားတွေဟာ ကျန်းမာတဲ့အခြေအနေကို ဖော်ညွှန်းပါတယ်။ သွားတွေကျန်းမာမှ ကိုယ်စားချင်တာ စားလို့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ခံစားချင်တဲ့ အရသာကို မြည်းစမ်းနိုင်ကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သွားဟာ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ ဒါ့အပြင် လူတစ်ယောက်ရဲ့အလှအပကိုလည်း သွားဟာ အဓိက ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါတယ်။ ရုပ်ဘယ်လောက်လှလှ၊ သွားမလှ၊ သွားချေးထူ၊ သွားကျိုးနေရင် ရုပ်ရဲ့အလှကို ကောင်းစွာ ပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ်။ သွားဟာ ကျိုးနေခြင်း၊ ပဲ့နေခြင်း၊ အခေါင်းပေါက်ဖြစ်နေခြင်း၊...	Continue Reading...	ကိုယ်ချက်ထားတဲ့ ဟင်းပွဲကို မိသားစုလိုက်စားတဲ့အချိန် အရမ်းပျော်တယ် – မေဖြူဖြူ	Posted on November 19, 2012 | No Comments
အခုမေဖြူချက်မယ့် ဟင်းလေးက ကြာဆံချက် ကိုချက်မှာပါ။ အဲဒီထဲမှာ ပဲလိပ်၊ အရောင်တင်မှုန့်၊ ကြက်သား၊ ကြက်သွန်၊ ကြွက်နားရွက်၊ မှိုခြောက်ပန်းခြောက်၊ မှို၊ ငုံးဥ၊ ကြာဆံချက်ဆိုတော့ ကြာဆံပါရမယ်။ ဆားကိုတော့ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အတိုင်းအတာတစ်ခုထိ ထည့်ပေးရမယ်။ ကြာဆန်ချက်ဟင်းက ချက်ရတာကလည်း မခက်ခဲဘူး။ စားရတာကလည်း ပေါ့ပေါ့ပါးပါးပဲ။ မေဖြူက ဆီများတဲ့ဟင်းဆို လုံးဝမကြိုက်ဘူး။ အခုကြာဆံချက်ဆိုရင် ၀ိတ်လည်းမတက်ဘူး။ ၀ိတ်လျှော့ချင်တဲ့လူတွေအတွက်...	Continue Reading...	ကျန်းမာရေးအတွက် အားကစား လုပ်သင့်သလို အစားအသောက်နဲ့လည်း ထိန်းသိမ်းသင့်တယ် – ဖြိုးသီရိခေတ်	Posted on October 26, 2012 | No Comments
ဖြိုးက ကျန်းမာရေးအတွက် အားကစားအနေနဲ့ Gym ကစားတယ်။ အရင်တုန်းက Traders Hotel မှာ Gym ကစားဖြစ်တယ်။ အခုတော့ အိမ်မှာပဲ ကစားဖြစ်တယ်။ ရေမချိုးခင် ၁၅ မိနစ်၊ မိနစ် ၂၀လောက် အားကစားလုပ်ဖြစ်တယ်။ အားကစားဆိုတာ ကျန်းမာရေးအတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်တဲ့အရာပါပဲ။ ကျန်းမာရေးအတွက် အားကစားလုပ်သင့်သလို အစားအသောက်နဲ့လည်း ထိန်းသိမ်းသင့်တယ်။ ကျန်းမာရေးအတွက် အဆီတွေအဆိမ့်တွေကို...	Continue Reading...	သွယ်လျပြီးသား သင့်ခန္ဓာကိုယ်ကို ဘယ်လို ထိန်းမလဲ	Posted on October 7, 2012 | No Comments
အသက်ငယ်ရွယ်စဉ်ကာလမှာ အချိုးအစား ကျနနေတဲ့ သင့်ခန္ဓာကိုယ်ဟာ အနည်းငယ် အသက်ရလာတာနဲ့ တဖြည်းဖြည်း ပြည့်ဖြိုးလာပါတော့မယ်။ ကိုယ်နဲ့ သက်တူရွယ်တူတွေ ဝမလာပဲ ပုံမှန်လေးပဲ လှပနေတာကို သင်ငေးကြည့်နေရမယ့် အဖြစ်မျိုး မရောက်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့ သင့်ရဲ့ လှပြီးသား ခန္ဓာကိုယ် အလှအပတွေကို အတတ်နိုင်ဆုံး ထိန်းသိမ်းရပါလိမ့်မယ်။ အမျိုးသမီးများဟာ သူတို့ခန္ဓာကိုယ် အလေးချိန်တွေ ကျသွားပြီးရင် ပုံမှန်အတိုင်းပဲ ပြန်လည်စားသောက်ရင်း ဝိတ်တွေ ပြန်တက်လာတတ်ပါတယ်လို့...	Continue Reading...	အမျိုးသမီးတွေ နှစ်သက်စေမယ့် အမျိုးသားများအတွက် ကိုလုံးနံ့သာ	Posted on October 3, 2012 | No Comments
ယနေ့ခေတ်ကာလမှာ လူတစ်ယောက်ရဲ့ တစ်ကိုယ်ရေ သန့်ရှင်းရေးဆိုတာ အလွန် အရေးကြီးလာပါပြီ။ လူတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် စတင် တွေ့ရှိမိကြတဲ့ First Impression ဘယ်လောက်အရေးပါတယ်ဆိုတာ အားလုံးသိကြမှာပါ။ အမျိုးသမီး တစ်ယောက်နဲ့ စတင်တွေ့ဆုံတဲ့ အမျိုးသား တစ်ယောက်အတွက်တော့ ဒီအမျိုးသားဟာ အမျိုးသမီးကို စိတ်လှုပ်ရှားစေနိုင်လောက်တဲ့ ဟန်ပန်သွင်ပြင်နဲ့ သန့်ရှင်းမှုမျိုး လိုအပ်တယ်ဆိုတာ အသေအချာပါပဲ။ အပြင်ပန်း သွင်ပြင်တွေ သန့်ရှင်းနေပြီးမှ အနီးကပ်...	Continue Reading...	Jean ချစ်သူတို့ စာမျက်နှာ	Posted on August 30, 2012 | No Comments
ဂျင်းဆိုတာ အစဉ်အလာကြီးတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုပေါ့ ။ နွားကျောင်းသား ၊ မြင်းကျောင်းသား ကလေးတွေရဲ့ ပလွေသံနဲ့အတူ သာယာခဲ့ရပြီး ဝင်းဝင်းလက်လက် လျှပ်စစ်မီးတွေ မှေးမှိန်သွားလောက်အောင် တောက်ပလာခဲ့တာလည်း ဂျင်းရဲ့အလှတရားတစ်ခုပေါ့ ။ အဝတ်အထည်အဖြစ်ကနေ တစ်ဆင့်တက်လို့ အိတ်၊ ဖိနပ်နဲ့ ကလစ် ၊ ဘီးကုတ် ၊ နားဆွဲပါမကျန် ဂျင်းစကလေးတွေရံလို့ လှပခြင်း ၊ ခန့်ငြားခြင်းနဲ့ ဂျင်းဆိုတာ ခွဲမရအောင်...	Continue Reading...	အိမ်ကို ရှင်းရှင်းလေးနဲ့ လှနေတာ ကြိုက်တယ် အရုပ်တွေ အများကြီး ထားချင်တယ် (မေမီကျော်ကျော်)	Posted on July 21, 2012 | No Comments
မေမီကျော်ကျော် အိမ် . . . တဲ့။ အဲဒီ့ဝေါဟာရကို ကြားလိုက်ရရင်ဖြင့် ရင်ထဲမှာ ငြိမ်းချမ်းသွားသလိုပါပဲ။ မိသားစုရဲ့ အငွေ့အသက်တွေ၊ ကိုယ်နဲ့အမြဲတစေ ထိတွေ့နေရတဲ့ အသုံးအဆောင် ပစ္စည်းလေးတွေ၊ နောက်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့ လုံခြုံနွေးထွေးမှုကို ပေးနိုင်တဲ့ စိတ်ခံစားချက်တွေ ရောယှက်ပါနေတာက . . . အိမ် . . ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရလေးပဲပေါ့။...	Continue Reading...	မထက်ထက်မိုးဦး မိုးကုတ်သူဖြစ်လို့ ဂုဏ်ယူမိပါတယ် (၀တ်မှုန်ရွှေရည်)	Posted on July 7, 2012 | No Comments
ကစ်ကစ်ရဲ့မွေးရပ်ဇာတိက မိုးကုတ်မြို့ကပါ။ မွေးတာကတော့ ရန်ကုန်မှာ မွေးပေမယ့် မိုးကုတ်မြို့မှာ ကြီးပြင်းခဲ့တာပါ။ ဒါကြောင့် မိုးကုတ်မြို့ဆိုတာ ကစ်ကစ်အနေနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ မွေးရပ်ဇာတိလို ဖြစ်နေပြီလေ။ မိုးကုတ်မြို့မှာ ကစ်ကစ်အနေနဲ့ ငယ်ငယ်တုန်းက အမှတ်တရတွေတော့ အများကြီးပဲလေ။ ကျောင်းဝတ်စုံ အစိမ်းလေးနဲ့ ကျောင်းတက်ခဲ့ရတာတွေ။ ကျောင်းကပွဲတွေမှာ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင် ကခဲ့ရတာတွေ၊ အတန်းတိုင်းမှာ ဆုရခဲ့တာတွေကတော့ ငယ်ငယ်တုန်းက ကစ်ကစ်ရဲ့ အမှတ်တရတွေပါ။ မိုးကုတ်မြို့က...	Continue Reading...	Page 1 of 1012345»10...Last »
LatestFeaturedCommentsTags	Zac Efron ပါဝင်သည့် Are We Officially Dating? ဇာတ်ကားသစ် ၂၀၁၄ နှစ်ဦးတွင် ရုံတင်မည်